जान्नुहोस , काठमाडौंका बोर्डिङले कतिसम्म शुल्क लिन पाउँछन् ? बढी लिए कारबाही हुने !
काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले निजि स्कुलले लिन पाउने अधिकतम शुल्क निर्धारण गरेको छ। महानगर बिधालय अनुगम तथा शुल्क निर्धारण समितिले अधिकतम शुल्क निर्धारण गरेको हो । निर्धारित शुल्क भन्दा बढी लिएको पाइएमा कारबाही हुने महानगर शिक्षा समितीले जनाएको छ।
महानगरले 'क' देखी 'घ' बर्गमा बिधालयको वर्गीकरण अनुसारको शुल्क निर्धारण गरेको हो । दुई बर्ष पछि समायोजन गरिएकाले शुल्कमा २७ प्रतिशत वृद्धि गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
नयाँ निर्धारित शुल्क अनुसार 'क' बर्गका स्कुलले कक्षा १ देखि ५ सम्म प्रति बिद्यार्थी अधिकतम २ हजार ८ सय १२ रुपैयाँ लिन पाउनेछ्न भने 'ख' बर्गले २ हजार ४ सय १८ रुपैयाँ लिन पाउने छ्न । त्यसैगरी 'ग' बर्गले २ हजार २४ र 'घ' बर्गले १ हजार ६ सय ३० रुपैयाँ लिन पाउने छ्न ।
कक्षा ६ देखि ८ सम्म 'क' बर्गले ३ हजार २ सय १५ र 'ख' बर्गले २ हजार ८ सय १ रुपैयाँ लिन पाउनेछ्न भने 'ग' बर्गले २ हजार ३ सय ५१ र 'घ' बर्गका स्कुलले १ हजार ९ सय १ भन्दा बढी सुल्क लिन पाउने छैनन ।
त्यसैगरी कक्षा ९ र १० मा 'क' बर्गले ४ हजार ३ सय ७३ लिन पाउनेछ्न भने 'ख' बर्गले ३ हजार ७ सय ६२ सम्म लिन सक्नेछ्न त्यसैगरी 'ग' बर्गको स्कुलले ३ हजार ४९ रुपैया सम्म लिन सक्छ भने 'घ' बर्गको स्कुलले २ हजार ५ सय ३७ रुपैया सम्ममात्र लिन पाउनेछ्न । महानगरले अधिकतम शुल्क निर्धारण गरेपनी विभिन्न अतिरिक्त शीर्षकमा शुल्क थप्दै चर्को फिस असुल्ने गरिएको छ।